STRAWBERRY "MARYSHKA": SHARAXAADDA IYO ASTAAMAHA NOOCYADA KALA DUWAN, TIKNOOLOJIGA BEERAHA EE SOO SAARISTA IYO BEERITAANKA (SAWIR) - STRAWBERRIES
Sida loo abuuro oo u koraan noocyo strawberries "Marshka"
Haddii aad rabto inaad naftaada iyo guriga oo dhan ku nasto strawberries cusub, ka dibna fiiro gaar ah kala duwan "Maryshka".
Sidee ay uga duwan tahay noocyo kale, sida loo daryeelo, si aad u hesho caafimaad leh, dalag badan, iyo sida loo ilaaliyo dhirta ka soo cayayaanka - waxaas oo dhan ayaa laga heli karaa maqaalkan.
Noocyada kala duwan ee noocyada strawberry ayaa waxaa la dhigay bred Czech, iyo waxa iska leh kuwa hore ee dhexdhexaad ah. Muuqaalka muuqaalka ah ee nooca berry ah waa miro weyn oo miro ah oo joogto ah. Bannaanka beeraha ka soo horjeeda caabbinta dhirta iyo heerkulka hooseeya. Waxaa habboon in la ogaado in noocyada soo bandhigay ay awood u leeyihiin inay soo saaraan, taas oo u muuqata mid ay suurta gal tahay in ay iibsadaan duurka - dhirta lafteeda ayaa kori doonta qaybta loo diyaariyey. Kala duwan Tani waxay ku faraxsan yihiin bannaanka iyo dhadhanka, iyo sidoo kale tayada cufan ee cayayaanka, si ay si fudud u dhoofi kartaa fogaanshaha dheeraadka ah ee iibka - tani ma aha in sida ugu muuqata on muuqaalka iyo xaalad of strawberry.
Strawberries ayaa sidoo kale lagu sifeeyay noocyo dhexdhexaad ah: "Asia", "Black Prince", "Crown", "Masha", "Vima Zant".
Muuqaal kale oo ka mid ah "Maryshki" - meesha caws ubaxa. Waxay, sida caadiga ah, ma hoos yimaad caleenta, laakiin ka sarreeya, taas oo ka ilaalisa dalagga ee cudurada suurtagalka ah. Sidoo kale, waxay si weyn u fududeynaysaa habka goosashada. Berrygu waa mid aan la tilmaamin oo kaliya muuqaal macquul ah, laakiin sidoo kale awood u leh inuu u bislaado waqti isku mid ah - waxay noqdaan kuwo ku haboon isticmaalka aadanaha isla maalintaas.
Sida aan u sheegnay miraha "Maryshki" ballaaran - hal strawber wuxuu leeyahay miisaan celcelis ahaan ugu yaraan 50 garaam. Midabka berry waa casaan, qurux badan, oo leh miraha huruud ah. Laakiin uurjiifku ma leh qaab gaar ah. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in berry Bisaylkiisa ku habboon si wadajir ah, sidaas darteed strawberries loo dhejin karo ama shuban-qaabeeya.
Tilmaamaha dhadhanka strawberries si farxad leh u yaab leh: waa macaan, miisaan, iyo waqti isku mid ah oo aan biyuhu, laakiin halkii qalalan, taas oo sidoo kale saameyn togan ku ah gaadiidka. Berry Marshki wuxuu u eg yahay strawberries kaynta
Ma taqaanaa? Xilligii dhexe, strawberries (qaar ka mid ah oo aan ugu yeerno strawberries) waxaa loo tixgeliyaa berry wasaq leh, sababtoo ah waxay ku koray dhulka, sidaas darteed waxay noqon kartaa sun ah sababtoo ah taabashada masaska iyo tolalka.
On hal baadiyaha ah ay ku dabooli karaan ilaa toban berry, siday u kala horreeyaan, beergooyska ka soo duurka waa qiyaastii badh kilo. Iyadoo hal mitir oo laba jibbaaran ah waxaad heli kartaa goosashada hal kiilo iyo nus kiilo - maaddaama dhirta ay si dhakhso ah u koreyso, waa in la qoondeeyo si loogu qoondeeyo meel ku filan oo aan ku beeran in ka badan saddex duurka hal mitir labajibbaaran.
Faa'iidooyinka kala duwan ee kala duwan ee strawberries ku badato, laakiin waxaa haboon in la xusuusto in helitaanka goosashada wanaagsan oo kaliya hal ninkii beerta oo si taxadar leh u ilaalinaysa geedka. Marka la eego, "Maryshka" ma keenayso dhib badan, laakiin waxaan kuu sheegi doonaa xeerarka aasaasiga ah ee beerto iyo daryeelidda duurka.
Hubi noocyada ugu fiican ee strawberries waaweyn.
Badanaa sababaha cuduro badan ama dhirta dhirta ayaa ah mid aan awood u lahayn in uu doorto waxyaabaha la beerto. Sidaa darteed, waxaa si xoog leh lagula talinayaa in ay fiiro gaar ah u ah muuqaalka ah ee geedo - for beerto, qaadan kuwa u muuqata xoog leh. Laakiin tabar-darro, waxyeelo ama calaamadaha cudurka, geedo waa in laga fogaadaa, sababtoo ah waxay u egtahay in aysan awoodin inay kobcaan oo ay kuu keenaan ugu yaraan goosashada.
VIDEO: SIDEE AYAAD KA LEEYAHAY SEEDLANDS SEEDLINGS Xididdada seedling ee dhererka waa inay ahaadaan ugu yaraan 7 cm, iyo dhexroorka xididada xididka waa inay ka weyntahay 6 mm - calaamadahaasi waa dabeecad caafimaad leh oo geedo lagu horumariyey.
Waxaa sidoo kale ugu wanaagsan in aan la helin wax soo saarka kaas oo uu leeyahay qaladaad ee qaabka caleemaha qallalan ama dhibco cad cagaarka. Caleemaha caafimaad leh waxay leeyihiin midab tufaax ah.
Waxa kale oo muhiim ah meesha aad qorshaynayso inaad ku koraan berry macaan. "Maryshka" waxay door bideysaa meel bannaan, iyada oo aan joogin dhirta dheer dhererka - geedo iyo xoortay, kuwaas oo ku tuuri doona hooska on strawberries. Buundooyinka waa u muhiim in la galo iftiinka qorraxda, sida lagu dhex beeray hooska, waxay siin doonaan dalagga yaryar, iyo dhadhanka berry ayaa noqon doona mid macaan.
Waa muhiim! Waa mid aan loo baahnayn in lagu dhowaado tamaandhada, eggplants, bataatiyada, basbaaska iyo dalagyada kale ee bidhaamada ah "maryshka". Dhammaantood waxay noqon karaan kuwo sidayaal ah oo verticillosis ah oo dabadeedna u dillaacaan duurka strawberry cudurkan.
Qoyaan xad dhaafka ah ee ciidda ayaa sidoo kale dhaawici kara caafimaadka geedka, sidaas darteed dooro aagagga laga ilaaliyo fatahaada si ay u beerto geedo. Cuntooyinka waxaa lagu samayn karaa dhulka qoyan ama tuulo ayaa loo sameyn karaa si loo ilaaliyo strawberries ka kallana cawl.
Sida ugu fiican, xayawaanka loamy waxay ku haboon yihiin "Maryshki", astaamaha ay ku jirto 5.5-6. Ka hor inta beerto geedo, waxaa lagama maarmaan ah in bacrimiya ciidda.
Haddii aad doonayso inaad "gashato" Maryshka guga, ka dibna daaweynta ciidda waa in la sameeyaa iyadoo la adeegsanayo bacriminta organic iyo macdanta.
Meelaha hal mitir oo labajibbaaran waxaad u baahan doontaa waxyaabaha soo socda:
Humus - baaldi kala badh;
chloride potassium - 20 garaam;
superphosphate - 60 garaam.
Ka hor inta beerto dayrta ee strawberries, waxaad isticmaali kartaa oo keliya Bacriminta organic.
Quudinta "Maryshki" waa in la sameeyaa sanadka labaad ka dib markii la beero geedo. Tani, xal ayaa loo diyaariyaa iyadoo saldhig u ah mullein (1 qayb) iyo biyo (4-5 qaybood).
Waa muhiim! Diyaarinta ciidda beeritaanka guga ee geedo waa in la fuliyaa bilaha dayrta, iyo dayrta, siday u kala horreeyaan, guga.
Cagaarshowgu ma noqon karo uun raaxo leh dhadhan fiican, laakiin sidoo kale qurxinta dhismahaaga, haddii aad dhisto sariir wareeg ah ama sariirta haramka sariirta.
Waxaad bedeli kartaa nitrophoska - hal qaado oo keliya oo ah bacriminta ayaa loo baahan yahay 10 litir oo biyo ah. Biyaha digaagga mar waliba toban maalmood oo kasta ha noqoto xal diyaar. Waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo nidaamkan guga, ilaa ubaxa u muuqda duurka. Marka sida ugu dhaqsaha badan ay dhacdo, quudinta strawberry waa inay istaagto.
Waxaad horeyba u ogtahay in qoyaan xad dhaaf ah ay waxyeelleyn karaan "Maryshka", laakiin noocyada kala duwan maahan abaarta. Waraabinta strawberries waa in la siiyaa fiiro gaar ah - waxaa muhiim ah iyo waqtiga waraabinta, iyo xataa heerkulka biyaha.
Toddobaadka ugu horreeya ka dib markaad beerto waxaad u baahan tahay inaad maalin walba biyo uddiso. Hal mitir laba jibbaaran waxaad u baahan doontaa laba ilaa saddex litir oo biyo ah. Wixii toddobaadkii labaad ka dib markii la beero, waxaa lagama maarmaan ah in la yareeyo socodka dareeraha ee rhizome iyo biyaha biyaha strawberries kaliya toddoba maalmoodba mar. Xaaladaha ka soo horjeeda, waxaad halis ugu jirtaa in aad ka badato dhirta qoyaan, taas oo ka dhalata taas oo ay ku dhici doonto jirro. Xaddiga Tani ee waraabka ayaa caadiyan ah xilliga gu'ga-xilliga dayrta, xagaaga, kuleylka, dhirta u baahan yahay in la waraabiyo mar saddexdii maalmoodba mar, iyo kulayl xoog leh waxaa la samayn karaa maalin kasta oo kale. Waxaa habboon in la sameeyo habraacan aroortii hore ama fiidkii, goor dambe.
Waa muhiim! Heerkulka biyaha ee waraabka waa inuu ahaadaa heerkulka qolka, ha ku qabin xaalad kasta. Intaa waxaa dheer, waa in la ilaaliyo dareeraha horay - ku shub weel si aad u hesho waqti si sax ah u soo dhejiso.
Ka waraabi waraabinta strawberries Ka dib markaad cufanayso ciidda biyaha, waad iska nadiifin kartaa aagga haramaha iyo xaaqidda ciidda.
Kala duwanaanshaha noocyada kala duwan waxay u dulqaadanayaan heerkulka cimilada hoose, laakiin waa in la caddeeyo in aanay ku haboonayn waqooyiga - Siberia iyo Ural. Laakiin cimilada dabiiciga ah, strawberries waxay dareemi doontaa fiicnaan waxayna si fudud u dulqaadaneysaa qaboojinta iyo dhibicda heerkulka.
Waxaan ku talinaynaa in lagu barto noocyada ugu wanaagsan ee strawberries, kuwaas oo ku habboon ee sii kordhaya ee Siberia.
Xaalad muhiim ah ee beerto geedo waa heerkulka ciidda. Waa lagama maarmaan in ay leedahay waqti ay ku diiriso ugu yaraan 5-6 sentimitir. Sababtan awgeed, abuurista strawberries ee guga waa ugu fiican dhammaadka April ama horraanta May, ma horeeya. Beeraha xilliga dayrta ayaa loo baahan yahay ugu dambeyn bisha Sebtembar.
Ka hor inta aan la gelinin seedling ee ciidda, xididdadiisa waxay u baahan tahay in lagu daaweeyo xal. Diyaarinteeda waxaad u baahan doontaa litir biyo ah iyo 7 garaam oo ah "Agatha 25K". Kalkaaliyaha waxaa lagu bedeli karaa 15 garaam oo ah "Humate K". Xalka ka soo baxa, ku dhaji rhizome ee geedo.
Beerto strawberry waxaa lagu sameyn karaa afar siyood:
Naqshad Iyada oo habkan, laba ama saddex geedo ayaa lagu meeleeyaa hal dalool. Waa muhiim markaad geedo ku beerto si aad uhesho masaafada u dhexeysa - ugu yaraan 50 sentimitir. Habkani waa mid soo jiidasho leh, sababtoo ah waxay u fududahay ninkii beerta ka shaqeeyaa inuu ka takhaluso antennae ka badan baadiyaha, dalagguna wuxuu ku koraa marar badan oo dhadhan badan, maadama uu dhirta u helayo kuleyl badan oo kulaylka iyo kuleylka. Faa'iido la'aanta habkani waa baahida loo qabo in si taxadar leh loo daryeelo carrada oo uu kuuskuubo dhirta - waxaanu yeelan doonaa kabo, loosen iyo mulch ciidda marar badan.
Saf. Xulashadani waxay bixisaa khatarta fogaanta u dhexeysa alaabada beeritaanka 20 centimitir, inta u dhaxaysa safarka aad u baahan tahay inaad ka baxdo qiyaastii nus mitir.
Fiiri sifooyinka beeritaanka strawberries guga iyo dayrta.
Nest. Si ay u koraan hal buul oo strawberry ah, waxaad u baahan doontaa toddoba geed oo. Ku rid mid ka mid ah xarunta, dhulka lixaad. Xaaladdan oo kale, masaafada u dhaxaysa dhammaan geedo waa inay ahaataa ugu yaraan 5 sentimitir. Buuryo waa in lagu dhejiyaa fogaan ah 30 sentimitir, haddii ay isku mid yihiin. Rugaha waa inuu ahaado qiyaastii 40 sentimitir.
Qalabka. Nuxurta habka soo degitaanka waxaa lagu beeray qalab beerto si xor ah. Tan iyo "Maryshka" si fiican u koraan, ugu dhakhsaha badan rooga strawberry ayaa laga sameeyay goobta. Habkani waa mid fiican haddii aanad awood u lahayn inaad si joogto ah u daryeesho geedka. Faa'iido la'aanta habkan waa hoos u dhac tartiib tartiib ah ee dhalidda duurka.
Xitaa beerta beerta bilowga ah wax dhibaato ah kuma yeelan doonto kala duwanaanshahan. Waxa kaliya oo muhiim ah in la bixiyo fiiro gaar ah oo ku saabsan dhammaan xaaladaha qudaarta strawberries, iyaga u hoggaansan iyaga oo ha ilaawin in ay daryeelaan geedka waqtiga habboon.
Ma taqaanaa? Qormooyinka ugu horreeya ee strawberries waxaa laga helaa marka laga soo tago qarniyadii I-II qarnigii BC, ka dibna waxay ahayd qiimaha hantida waxtar leh, oo aan dhadhamin.
Khaladka kaliya ee in ay bannaanka u janjeeraan samayn karaan waa awoodda ay u leeyihiin biyaha "Maryshka" si ay duurka u helaan qoyaan ku filan, laakiin aan la dhaafin leh.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka badan ee kala duwan ee soo bandhigay waa iska caabinta cudurada badankood. Si kastaba ha noqotee, ha nasteexin - daryeelka saxda ah ee warshadda lama tirtirin. Ka dib markii dhan, waxaa ugu mahadcelineysa in aad ka fogaan karto suurtogalnimada in jeermiska laga dilo cudurada dhowrka ah, iska caabin ah "Maryshki" aan la fiirin.
Mid ka mid ah cuduradani waa fungus. Si looga fogaado, ka hor inta aan laga beeri geedo dhulka, ku ridi sokorada xalalka soo socda: copper sulfate (1 qayb) iyo soodhaha (6 qaybood). Toban litir oo biyo ah waxay u baahan tahay 30 garaam oo isku dhafan.
Isticmaalida sulphate copper ee beerta waa in la ogaado saameynta sumowga leh walaxdan.
Cudurrada kale ee aad la kulmi karto markaad sii kordheyso "Maryshki" waa root-gaduud cas. Waxaa jira cudur noocaas ah sababtoo ah qoyaan xad dhaaf ah ee ciidda, waraabinta xad dhaafka ah ama la'aanta shucaaca ultraviolet. Si loo ilaaliyo duurka ka soo kallana xidid kore, daaweeyo geedo leh xal daciif ah ee fungicides. Horay loo soo saaray geedo ayaa lagula talinayaa in ay kormeeraan maalin kasta, si aad u aragto isbeddel muuqaalka kore ee baadiyaha waqtiga iyo ka saari duurka khalkhalka waqtiga. Tani waxay ka hortagi doontaa faafin dheeraad ah ee cudurka.
Marka laga eego dulin, markaa "Maryshka" waxay leedahay caabiga shilinta. Cayayaanka qaabka weevil, kuwa lamid ah iyo kuwa lugaha strawberry waa la tirtiri karaa haddii dhirta lagu daaweeyo Karbofos. Hawlaha ugu fiican ayaa loo sameeyaa maalinta qallalan ee aan lahayn. Heerkulka wakhtiga wax lagu shaqeynayo ma ahan in uu ka sareeyo +15 ° C Soo koobid, waxaan dhihi karnaa in kala duwan ee strawberry "Maryshka" ku haboon yahay labada beerta nadiif ah iyo hiwaayad ama bilowga. Waxa kaliya ee loo baahan yahay in la sameeyo si loo helo dalag dhadhan leh, midho macaan leh waa in la raaco talooyinka fudud iyo inuusan ilaawin in dhir kasta uu u baahan yahay daryeel.
Geedaha at Maryshki xoog leh, faafidda, caleen waa cagaaran iftiin, jilicsan. Peduncles - dhaadheer, dhuuban, waxay ku jiifsan yihiin culeyska beeraha, Awoodda helitaanka waxbarashada waa mid aad u sareysa. On baadiyaha qof weyn wuxuu noqon karaa 15 - 20 peduncles. Berry waa weyn, jidhka had iyo jeer waa mid macaan, karis, caraf udgoon ee strawberries duurjoogta. Ilaa ilaa 60 caws oo waaweyn (ilaa 20-25 g kasta) waxaa la aasaasay baadiyaha. Dhaqdhaqaaq buuxda, berry wuxuu noqonayaa madow, casaan. Ka dibna dhadhankiisu waa mid cajiib ah!
Mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee qoyska oo idil waa yar yar ee Maryshka. Carruurta, magaca code "faraha"
Dhexdhexaad dhexdhexaad ah, daboolka hoose ee si fudud u tagaa khadka dhamaadka iyo noocyada hore. Kuurku wuu hooseeyaa, iswaafajiyaa.
Waxaa inta badan lagu sharraxay sida ugu caansan uguna macaan.
Berry waa mid inta badan dhexdhexaad ah, ballaaran. Mararka qaarkood waxaa jira qaabab aad u weyn (qaab ah).
Miro miraha (miro) dusha sare waa cagaar-cagaaran midabka, caarada beeraha waa sanduuqooda ugu muhiimsan, sidaas darteedna inta badan, xitaa markaad buuxdaoto, caarada ayaa leh cagaar cagaaran.
Berry waxay ku badashaa macaanka sonkorta cimilada. Haddii qof sugi karo midabka burgundy ee berry - dhadhanka waa lama huraan. Shakhsi ahaan, waxaan dhadhamiyaa berry ah noocyada kala duwan ee ugu dhow ee dhadhanka strawberries duurjoogta.
Kala duwan ayaa u adkaysata cudurrada adag. Wuxuu u dulqaadanayaa si wanaagsan, xitaa haddii aan la waraabin muddo dheer.
Just ma ogaan sida casiir leh berry noqon doonaa. haddii aysan jirin wax waraabin ah inta lagu jiro Bisitaanka.